HERIN’ARATRA TAPATAPAKA : MISY VAHAOLANA AO AMIN ' NY BAOLAI · déliremadagascar
Socio-eco	 23 avril 2021 .
Rehefa vaninandro toy izao dia ny kojakoja elektronika mandeha amin’ ny herinaratra no mahasarika ny daholobe.Ao anatin’ izany, dia manavao ny tolotra omeny ny mpanjifa ny Tranombarotra « Baolai ». « Ho fiomanana sahady amin’ ny fety ny « Ascension sy Pentecôte » ho avy, dia maro isankarazany ny entana lohalaharana amin’ ny kalitao ato aminay. Izay ho hita etsy Soarano sy Analakely ary ao Bazar be Toamasina » hoy ny tompon’ andraikitra.
Ao ny panneaux solaires mono et polychristalline, izay ilain’ny daholobe tokoa noho ny fahatapahan’ herinaratra matetika tato ho ato. Mbola misy koa ny Smart tv sy télé led misy manomboka 22 hatramin’ ny 75 » – Laser tv 100 » ( misy antoka herintaona ), subwoofers, machine à laver, réfrigérateur, four micro-onde, synthétiseur, lecteur divx/dvd, amplificateur, … « Ny atsipiriany izany rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ ny « site web » sy pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 033 37 968 88 (amin’ ny ora fiasana) » hoy hatrany ny tompon’ andraikitra. Dia ho maro loko tokoa ny famaranana an’ ity volana aprily ity , miaraka amin’ ny ny Tranombarotra « Baolai ».